Balatiniyaam - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Pt)
Quruurax curiyaha Balatiniyaam.
Balatiniyaam (ingiriis: Platinum) astaanta (Pt) waa curiye kimiko oo tirada atomkiisu tahay todobaatan-iyo-sideed (78). Curiyaha Balatiniyaam waa bir ka tirsan Transitional Metalska ee guruubka 10aad iyo heerka 6aad ee Diwaanka Curiye iyo guruubka d-block.
Curiyahan Balatiniyaam waa bir aad u culus, leh midab cagaar-cadaan xiga, taasi oo leh lix isotope oo laga helo oogada dhulka si dabiici ah. Waxay ka mid tahay curiyayaasha ugu yar ee laga qodo dhulka, waana tan ugu falgal hooseysa dhammaan 118 Curiye. 80% Balatiniyaamta waxaa laga soo saaraa dalka Koonfur Afrika ayadoo ka mid ah isku dhisyo macdanta Kober iyo Nikel.
Baladiyaamta, Balatiniyaamta, Roodhiyaamta, Iridiyaamta, Rutheniyaamta iyo Osmiyaamta waxay ka mid yihiin guuto loo yaqaano guruubka Birta Balatiniyaam ama (Platinum Group Metals) oo loo soo gaabiyo (PGMs). Curiyayaasha guruubkan waxay leeyihiin astaamo iyo hab dhaqan isku dhow, laakiin Baladiyaamtu waa mida ugu hooseysa barta dhalaalinta (melting point) ee curiye.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Balatiniyaam&oldid=219212"
Last edited on 11 Oktoobar 2021, at 22:17
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 11 Oktoobar 2021, marka ee eheed 22:17.